Falanqeyn: Khasaarihii xoogganaa ee Al-Shabaab loogu geystay deegaanka Baxdo
Deegaanka Baxdo oo qiyaastii 90 km bariga ka xiga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaa shalay dagaal culus uu ku dhex maray Al-Shabaab oo dhinac ah, iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan daraawiishta Galmudug oo isku dhinac ah.
Ilo kala duwan ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 40 ka mid ah malayshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaasi.
Maamulka Galmudug ayaa tirada intaa ka badinaya oo sheegaya in ay weerarkaasi ku dhinteen malayshiyaad ka badan boqol.
Marka laga soo tago marar ay ciidamada Mareykanka sheegeen in ay duqeymo uga dileen Al-Shabab malayshiyo fara badan, casharka Baxdo shalay Al-Shabaab loogu dhigay ayaa ka mid ah kuwa fara ku tiriska ah oo weerar ay iyagu qaadeen ka dhigay dharbaaxo culus oo soo gaartay.
Haddaba, maxay Al-Shabaab guul-darro marar badan u gala kulmaan dagaallada ay la galaan dadka shacabka ah? Su’aashaasi ayuu Maxamed Colaad Xassan weydiiyay Axmed Kaboole oo bartay arrimaha ammaanka horeyna u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Falanqeyn ku saabsan khasaarihii Shabaabka ka soo gaaray Baxdo